Accueil > Gazetin'ny nosy > Rivodoza Ava: Nanao tombana ny loza ny Préfet de police
Rivodoza Ava: Nanao tombana ny loza ny Préfet de police
Omaly alatsinainy faha 08 janoary 2018 dia nampiatso ny mpanao gazety tetsy amin’ny birao fiasany tetsy Tsimbazaza ny Préfet de police eto Antananarivo renivohitra. Tonga niaraka taminy tamin’izany koa ny avy ao amin’ny zandarimariam-pirenena Analamanga sy ny avy ao amin’ny faritanin’Antananarivo.
Nanambara ireto tompon’andraikitra ireto fa 4230 no isan’ny olona tsy manankialofana teto amin’ny faritra Analamanga. Tsy nisy ny olona maty ary tsy nisy koa ny naratra nohon’ny fiomanana dieny mbola aloha. Efa lasa ny rivodoza Ava saingy mbola misy ny asa dia ny fitrohana ny rano izay tsy maintsy atao nohon’ny fahatsetseman’ny lakandrano maro. Noezahina koa ny tsy handefa ny olona traboina amin’ny sekoly mba hialana amin’ny fahatapahan’ny fampianarana izay efa niato maharitra tamin’ny pesta teo. Teny Ambohipotsy, Manjakamiadana Antsahondry no nisy fihotsahan’ny tany nefa tsy nisy loza nahazo ny mponina.
Na dia efa lasa aza ny rivodoza dia mbola mampitandrina ny « préfet de police » fa mbola misondrotra ny rano manodidinan’Antananarivo sy amin’ny toerana maro, ka tokony hitandrina ny olona rehetra.
Tany Fianarantsoa indray dia nahafaty fianakaviana 8 ny vokatrin’ny fihotsahan’ny tany teny Ivory Avaratra. Niandry faty ireto olona ireto no tra-doza izao.
Tapaka ny lalàna makany Vatovavy Fitovinany. Isan’ny voamafy tao Lokomby izay naharavana trano maromaro sy ny fiakaran’ny rano be loatra. Nahatratra 278 ny olona tsy manankialofana ankehitriny. EPP efatra no simba. Miakatra be koa ny rano any amin’ny distrikan’i Vohipeno ka marobe ny olona no mitoka-monina amin’izao fotoana izao.
Tao Ifanadiana indray dia doborano ny toerana maro ka tapaka ny lalàna tao Ranomafana. Lavakabe no hita manerana ny làlana maro.
Ambatofinandrahana indray dia isan’ny nitondra faisana ihany koa satria tapaka ny tetezana mampitohy an’Ambositra sy Ambatofinandrahana ary Manadriana ao amin’ny toerana hoe Andranonanakova. I Soavina sy Ambondromisotra dia efa mitoka-monina tanteraka satria tetezana roa no tapaka mankany amin’ity toerana izay mpamokatra lehibe ao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana ity.
Efa lasa any amin’ny 250 km atsinanan’i Fafangana ity rivodoza AVA ity omaly saingy ny takaitra nentiny dia mbola mamela ratrabe.
Seranam-piaramanidina ao Antsiranana: Manjaka ny kolikoly, maro ireo mpandeha mitaraina
Raha ny eto Madagasikara aloha dia zavatra iray efa tsy mahagaga ny olona intsony ny fisian’ny kolikoly, na aiza na aiza toerana haleha. Anisan’ny toerana tsy mety hilaozan’izay kolikoly izay ny seranam-piaramanidina, na ny eny Ivato izay faritana ho seranam-piaramanidina iraisam-pirenena, na ireo any amin’ny faritany. Tato anatin’ny volana maromaro izay dia maro amin’ireo mpandeha amin’ny sidin’ny kaompania Air Madagascar no velon-taraina manoloana ny kolikoly misy ao amin’ny seranam-piaramanidina Arrachart ao Antsiranana, izay ataon’ireo mpiasa sy tompon’andraikitra sasantsasany ao an-toerana . Raha ny filazan’ireo mpandeha vitsivitsy nijoro vavolombelona, izay nisafidy ny tsy hitonona anarana, dia misy amin’ireo mpandeha matetika no sakanan’ireo tompon’andraikitra tsy hiakatra ao anaty fiaramanidina raha tsy manome vola na manolotra kely araka ny fomba fitenenana. Voalaza fa 1 hetsy ariary farafahakeliny no takiana amin’ireo mpandeha vao mahazo miakatra ao anaty fiaramanidin’ny kaompania Air Madagascar na dia ara-dalàna tsara izao aza ny tapakila. Ny matetika mitranga ao amin’ity seranam-piaramanidina Arrachart ao Antsiranana ity koa, raha ny filazan’ireo mpandeha hatrany, dia ny fisian’ireo mpandeha tsy manao ny “réservation” akory kanefa tsy maintsy mahazo toerana ao anaty fiaramanidina rehefa manolotra vola bebe kokoa noho ireo mpandeha hafa. Mametra-panontaniana moa ireto mpandeha mijoro vavolombelona ireto : “mba fantatry ny lehiben’ny masoivohon’ny Air Madagascar ao Antsiranana ve izao fomba ratsy sy mamohehatra ataon’ny mpiasa sasan-tsasany ao amin’ny seranam-piaramanidina Arrachart izao sa tsia?” Manoloana izany dia miantso ireo tompon’andraikitra rehetra, indrindra fa ny ministeran’ny fitaterana, mba hijery akaiky ary hanao fanadihadiana lalina momba ity toe-javatra iray ity ireo mpandeha nijoro vavolombelona.